पेटभित्र मित्रजीव- विचार - कान्तिपुर समाचार
पेटभित्रका कतिपय जीवले शरीर स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छन् । ती मित्रजीवलाई सुरक्षित र नियन्त्रित राख्ने प्रयास भने गर्नुपर्छ ।
आश्विन २५, २०७५ रामचन्द्र अधिकारी
काठमाडौँ — कसैलाई नराम्ररी भन्नुपर्‍यो भने मानिसले ‘पेटमा किरा परोस्’ भन्छन्  । तर पेटमा किरा परोस् भन्नु आशिर्वाद पनि हुनसक्छ  । उसो त पेटमा किरा नभएको मानिस छँदै छैन । जन्मेर दुई वर्षको भइसक्दा मान्छेको पेटमा किराले घर जमाइसकेका हुन्छन् । यहाँ किरा भन्नाले जुका र प्राटोजोआ, ब्याक्टेरिया, भाइरस फन्जाईजस्ता सूक्ष्मजीव हुन् ।
कसैलाई नराम्ररी भन्नुपर्‍यो भने मानिसले ‘पेटमा किरा परोस्’ भन्छन् । तर पेटमा किरा परोस् भन्नु आशिर्वाद पनि हुनसक्छ ।
मानिसको पेटमा करिब एक हजार खर्बवटा त ब्याक्टेरिया स्थायी रूपमा बसेका छन् । यो भनेको शरीरमा भएका मानवीय कोषभन्दा करिब तीन गुणा बेसी हो । ब्याक्टेरियाका तीन सयदेखि पाँच सय प्रजाति पेटभित्र छन् । एक कोषीय प्रोटोजोआका कम्तीमा २५ प्रजाति छन् । जुकाका तीन सयजति प्रजाति मानिसको पेटमा हुन्छन् । फन्जाईको विविधता पनि निकै घना छ ।
वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान निष्कर्ष अनुसार यी परजीवीको मानिससँग सहकार्यात्मक क्रमविकास भएको छ । यस आधारमा वैज्ञानिकहरू पेटका परजीवीको बेफाइदामात्र होइन, फाइदा पनि रहेछ भन्नेमा विश्वस्त भए । परजीवीहरू मानिससँग पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित गरेरै बसेका छन् । बेफाइदा आफ्नै ठाउँमा होला, तर यो लेख फाइदाजनक पक्षमा केन्द्रित छ ।
हाम्रो अमाशयमा कडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्ने भएकाले यस्ता परजीवीलाई सो बासस्थान उपयुक्त हुँदैन । सानो आन्द्रामा पनि थुप्रै इन्जाइमले असर गर्ने भएकोले बस्न रुचाउँदैनन् । ठूलो आन्द्रा भने असाध्यै सुरक्षित बासस्थान हो, जहाँ नपचेको खानेकुरा दिसा बन्ने क्रममा थुप्रिएको हुन्छ । ब्याक्टेरियाले मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रबद्र्धन गरिदिन्छन् ।
आन्द्राको भित्तालाई बलियो बनाएर अल्सर हुनबाट जोगाउँछन् । अन्य संक्रमणबाट पनि बचाउँछन् । कार्बोहाइड्रेडलाई आसवीकरण (फरमेन्टेसन) प्रक्रियाबाट एक्टिनो क्याक्टेरिया र फिर्मिएक्टसले ब्युटाइरेटमा रूपान्तरण गरिदिन्छन् । यो रसायनले आन्द्राको भित्तामा जलन हुन दिँदैन र क्यान्सरबाट जोगाउँछ । ब्युटारेट ठूलो आन्द्राका भित्तामा रहेका कोषहरूको खान्की हो । ल्याक्टोबेसिलस ब्याक्टेरियाहरू भिटामिन बी उत्पादनका चाबी हुन् ।
खासमा जनावर, वनस्पति र फन्जाई कसैले पनि भिटामिन बी निर्माण गर्न नसक्ने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ । बाइफिडो ब्याक्टेरियाले फोलेट भनिने रसायन उत्पादन गरिदिन्छन्, जुन आनुवांशिक सामग्री डीएनए निर्माण गर्न सहभागी बन्छ । ब्याक्टेरियाले आन्द्रामा भिटामिन के उत्पादन गर्छन्, जसले घाउबाट रगत बग्ने क्रमलाई रोक्छ । विभिन्न भिटामिन राइबोफ्लाबिन, बायोटिन, निकोटिनिक एसिड, थाइमिन, पाइरिडोक्सिन आदि पनि ब्याक्टेरियाले पेटभित्र निर्माण गर्छन् ।
ठूलो आन्द्राको कोलोनमा बस्ने कोलोनिक ब्याक्टेरियाले बाइल एसिड पाचन गराउँछन् । सो एसिडलाई पचाउन सकिएन भने मोटोपना बढ्ने, मधुमेह चाँडै लाग्ने र पेट सम्बन्धीका अन्य रोग लाग्ने सम्भावना तीव्र हुन्छ । औधि दुब्लो मानिसलाई मोटाउन पनि ब्याक्टेरियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जस्तै– वैज्ञानिकहरूले एउटा अनुसन्धान गरेका थिए कि मोटो मानिसका पेटमा भएका ब्याक्टेरिया मुसामा स्थानान्तरण गरी हेर्दा मुसा मोटाए । परीक्षण काल र सो अघिको खान्कीको मात्रामा कुनै भिन्नता गराइएको थिएन ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता बेन्जामिन ई वोल्फले खानपान र जीवनशैली अनुसार मानिसका पेटमा फरक किसिमका ब्याक्टेरिया हुँदारहेछन् भन्ने पत्ता लगाए । ब्याक्टेरियाले पोषण तत्त्व उत्पादन गरिदिने मात्र होइन, शोषण क्रियामा समेत योगदान गर्छन् । हानिकारक ब्याक्टेरियालाई दबाउने एन्टिबायोटिक उत्पादन गरेर रोगबाट जोगाउँछन् । यस्ता उपयोगी ब्याक्टेरियाको संख्या र कार्यक्षमतामा ह्रास आएमा शत्रु ब्याक्टेरियाले हामीलाई आक्रमण गर्ने हुन् । रेसादार खानेकुरा जस्तै– फलफूल, सागपात आदिको रेसालाई ब्याक्टेरियाले सट चेन फ्याट्टी एसिडमा परिवर्तन गरिदिन्छ । यो रसायन हर्मोनको सहायक बनिदिन्छ ।
फन्जाई वा ढुसीको उपस्थिति पनि पेटभित्र राम्रै छ । क्यान्डिडा, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, स्याकारोमाइसिज आदि फन्जाई हामीसँग दोहोरो सम्बन्ध स्थापित गरी बसेका छन् ।
हामी पेटमा पर्ने जुकालाई हानिकारक ठान्छौँ । तर हाम्रो स्वास्थ्य असल राख्न जुकाले भूमिका निर्वाह गरेको हुनसक्छ । अहिले हेल्मिन्थेरापी (जुकाको प्रयोगबाट गरिने उपचार पद्धति) विकास भएको छ । बल्छीजुका (हुक वर्म), कोर्राजुका (विप वर्म) आदिको अन्डा वा वयस्क प्रयोग गरी दम र मधुमेहको उपचार गर्ने परीक्षणात्मक कार्य सफल भएको छ ।
एरिजोना सेन्टर, सान फ्रान्सिस्कोका चिकित्सक पाउल अब्राम्सनले इथियोपिया र भियतनाममा यसबारे अनुसन्धान गरेका थिए । त्यसको प्रतिवेदनले भनेको छ– जसलाई बल्छीजुकाले जीवनको कुनै कालखण्डमा आक्रमण गरेको थियो, तिनीहरूमध्ये कमैलाई मात्र दम रोग लागेको पाइयो । अफ्रिकाका केही देशमा बालकलाई जुकाबाट सुरक्षित राखियो, तर उनीहरूमा केही वर्षपछि डस्ट माइट भनिने किराबाट हुने एलर्जीको प्रकोप अत्यधिक पाइयो । जुका पीडित बालबालिकामा भने यस्तो समस्या पाइएन ।
जीवनमा एकपटक जुकाको आक्रमण भए यसले धेरै रोगलाई भ्याक्सिनको जस्तो काम गरिदिन्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ । यसको प्रभावमा परी जीउको प्रतिरोधात्मक क्षमता क्रियाशील बन्छ । ब्याक्टेरिया, प्रोटोजोअन र फन्जाईको पनि यस्तै विशेषता र भूमिका हुन्छ ।
शरीर भित्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा सन्तुलन यिनैले कायम गर्छन् । यिनको संख्या र नियमित गतिविधिमा कुनै उतार–चढाव आयो भने पेटमा खराबी आउँछ । संख्यामा गिरावट आयो भने दबाइका रूपमा यिनै जीवका बिउलाई जीउमा प्रवेश गराइन्छ । तसर्थ अघातक मात्रामा यस्ता उपयोगी जीव रहिरहे शरीर स्वस्थ रहन्छ । कहिलेकाहीँ संख्या बढ्यो भने असर बढ्छ र अरु रोग समेतले गलाउँछन् । तसर्थ पेटमा बसेका मित्रजीवलाई सुरक्षित र नियन्त्रित राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । लेखक त्रिवि स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरको प्राणीशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।
ramchandra.adhikari@gmail.com प्रकाशित : आश्विन २५, २०७५ ०८:०२
धेरै किरा खाइदिएर माकुराले बालीनाली जोगाइदिएको छ । रेशम खेतीझैँ माकुरा खेती गर्न सकिएला कि भनेर अध्ययन हुँदै छ ।
आश्विन ९, २०७५ रामचन्द्र अधिकारी
काठमाडौँ — माकुरीको जाल निकै शक्तिशाली हुन्छ । मायाप्रेमले यसलाई आदर्श सामग्री मानेको छ । के माकुरीको जालो बलियो होला ? वैज्ञानिक पनि विश्वस्त भएका छन्– माकुरीको जाल निकै बलियो हुन्छ । उत्तिकै ब्यास भएको स्टीलभन्दा जालोको त्यान्द्रो दह्रो हुन्छ ।
माकुरीले जालो किन बुन्छ ? माकुरालाई फँसाउन कि आहारा किरा पँmसाउन ? कि अरू कुनै प्रयोजन छ ? हुन त भाले र पोथी दुबै जालो बनाएर बस्ने हुन् । किरालाई आकर्षित गरी फँसाउन र खाएर भोक मेटाउन जाल बनाएका हुन्छन् ।
तर माकुरी (पोथी माकुरा) ले भालेलाई फँसाउन पनि जाल थापेकी हुन्छे । माकुरीको जाल कलात्मक पनि हुन्छ । भाले डुल्दै आउँदा आफ्नै जालोलाई मनपराओस् र आफ्नैमा फँसाउन पाइयोस् भनेर पोथीले आकर्षक जालो बनाएकी हुन्छे । भाले घुम्ने क्रममा सबैभन्दा मनपरेको, राम्रो जालोको छेउमा जान्छ । अनि जालो हल्लाउँछ । पोथीले मनपर्दो भाले रहेछ भने स्वागत गर्छे, अनि तिनीहरूको सहबास हुन्छ । राम्रो जालमा फँसेको भाले यौनकर्म सकिने बित्तिकै जाल छाडी भागेन भने पोथीले उसको ज्यानै लिन्छे । ‘माकुरीको जालमा फँस्यो’ त्यसै भनिएको होइन । भालेले अर्को चलाखी भने गर्छ । यौनकर्म सकेको कति पनि समय नबित्तै आफ्नो जालो निकाल्छ र पोथीको यौन अंग टालिदिन्छ, ताकि अरूसँग उसको सम्पर्क नहोस् ।
खानेकुरा पासोमा पार्न, आफू शत्रुबाट सुरक्षित रहन, टाढासम्म हावामा तैरिएर पार गर्न पनि माकुरालाई जालो चाहिएको छ । डार्बिन बार्क स्पाइडर भनिने एक प्रकारको माकुरोले ८० फिट फराकिलो नदीमाथि जालोको पुल बनाएर वारपार गरिरहेको उनै वैज्ञानिक चाल्र्स डार्बिनले अनुसन्धानका क्रममा भेटेका थिए भन्ने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ ।
माकुराको शरीरलाई धागो वा जालोको कारखाना भन्ने गरिन्छ । जीउभित्र भएको ग्रन्थिबाट अथाह मात्रामा जालो बुन्ने धागो निस्किन्छ । सुरुमा निस्किरहँदा तरल हुन्छ, हावाको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै ठोस रूप लिइहाल्छ । धागो (सिल्क) निकाल्ने पेटको पछिल्लो भागमा दुईदेखि छवटा स्पिनेरेट्स हुन्छन् । माकुराले दिनका दिन जालो फेरिरहेका हुन्छन्, उही ठाउँमा भए पनि । पुरानो जालोलाई डल्लो पारेर बेर्छन्, अनि खान्छन् पनि । जालोमा प्रशस्त प्रोटिन पाइने भएकाले खान्कीको आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ ।
माकुराको जाल प्रजातिपिच्छे फरक हुन्छ । विभिन्न आकार–प्रकार र रंगका जाल हुन्छन् । साथै घामपानीबाट जोगाउनलाई अनेक रसायन प्रयोग गरेको पाइन्छ । बगैँचामा पाइने साधारण माकुराले सात प्रकारको धागो उत्पादन गर्छ, सीप लगाएर जालो बनाउँछ ।
माकुराको जालोका विषयमा धेरै वैज्ञानिकको ध्यान तानियो । यसका अवयवबारे अनुसन्धान भए । उनीहरूले मानव जातिका लागि यो निकै उपयोगी हुने ठहरसमेत गरे । कृत्रिम टेन्डन, लिगामेन्ट, पट्टी, कपडा लगायत गोलीरक्षक कम्ब्याट ड्रेससम्म पनि बनाउन सकिने अनुमान गरिएको छ । जालोको कृत्रिम उत्पादन गर्न सकिएको छैन । रेशम खेती गरेझैँ माकुरा खेती गर्न सकिएला कि भनेर अध्ययन भइरहेको छ । यो जीवबाट सोझै आर्थिक फाइदा उठाउन सकिएला कि भनेर अनुसन्धाता लागिपरेका छन् । माकुराको डीएनए बाख्रामा रोपिदिँदा बाख्राको दूधबाट सिल्क वा धागो उत्पादन हुन्छ भन्ने परिकल्पनामा आधारित भएर विभिन्न स्थानमा प्रयोगात्मक अनुसन्धान भइरहेका छन् । इकोली ब्याक्टेरियामा पनि परीक्षण गरिँदैछ । यी अनुसन्धानको परिणाम सकारात्मक आए इकोनोमिक जुलोजीमा क्रान्ति आउनेछ ।
आथ्र्राेपोडा वर्गको एराक्निडा कक्षामा पर्ने माकुराका आठवटा खुट्टा हुन्छन् । हिँड्दा पालैपालो चारवटाले मात्र टेकेको हुन्छ । संसारमा लगभग ४० हजार प्रजातिका माकुरा रहेको अनुमान छ । जुज प्रिन्ट जर्नल, २००७ फेब्रुअरी अंकमा अनुसन्धाता मञ्जु सिलवाल र सञ्जय मोलरले नेपालमा २ सय २२ प्रजातिका माकुरा भएको उल्लेख गरेका
छन् । तीमध्ये १ सय ७६ प्रजाति रैथाने हुन् ।
यो जीव किसानको सारथी हो । यसले धेरै किरालाई खाइदिएर बालीनाली जोगाइदिएको छ । चरा र चमेराले भन्दा बढी किरा माकुराले खान्छ भनेर प्राणीशास्त्रका पुस्तकमा लेखिएको छ । प्रत्येक एक हेक्टर भुइँमा १० लाखवटा माकुरा भेटिन्छन् । यिनीहरूले फूलमा परागसेचन गरिदिने, झारपातलाई कुहाउन सहयोग गरिदिने र स्वच्छ वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् ।
एउटा पोथीले तीन हजार वटासम्म अन्डा बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ । त्यति नै संख्यामा बच्चा कोरल्छ । कोरलिएका बच्चा स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्न थाल्छन् । यिनीहरूमा भ्रातृत्व र विवेक हुँदैन । मौका मिले एकले अर्कोलाई खाइदिन्छन् । प्रकृतिको मित्रजीव माकुरादेखि मानिस निकै डराउँछन् । विश्वका १० प्रतिशत पुरुष र ५० प्रतिशत महिला माकुरादेखि डराउँछन् भन्ने एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले बताएको छ ।
हामीले प्रायश: उस्तै र उत्रै माकुरा देखेका हौँला, तर धेरै साना अर्थात् पेन्सिलको तिखो टुप्पो जत्रादेखि लिएर करिब एक फुटसम्मका पनि हुन्छन् । सबैभन्दा सानो माकुरा पाटु डिघा हो । सबैभन्दा ठूलो थेराफोसा ब्लोन्डी हो । यो ११/१२ इन्च लामो हुन्छ । यसले छेपारा, सर्प, मुसा र चरासमेत खाने गर्छ ।
हुन त सबै माकुराले मानिसलाई छुँदैखेरि एलर्जी गराउने सामान्य असर गरेका हुन्छन् भने कुनै पुरै विषालु हुन्छन् । ब्राजिलियन वान्डरी माकुरोलाई सबैभन्दा विषालु मानिन्छ ।
यसको विषको सानो अंशले मानिसको मृत्यु हुन्छ । दक्षिण अमेरिका र मध्यअमेरिकाको जंगलमा यो माकुरो पाइन्छ । माकुरालाई प्रकृतिको उपहार भने पनि हुन्छ । यसले मानव जगतलाई धेरै लाभ दिएको छ । यसको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापन जरुरी छ ।
लेखक त्रिवि प्राणीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका उपप्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७५ ०८:०६